Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » New AC Hotel Atlanta Airport Albaabka
Airport • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Hoteel cusub oo loo yaqaan 'AC AC' oo laga leeyahay Marriott Atlanta Airport Gateway ayaa diyaar u ah socotada
New AC Hotel Atlanta Airport Gateway waxay dib ugu soo bandhigaysaa suuqa iyada oo ah dookha la doorbido ee socdaalka socda maanta.
222-qol AC Hotel Atlanta Airport Gateway ayaa dib isugu soo bandhigaysa suuqa.
New AC Hotel Atlanta Airport Gateway ayaa la furay Janaayo 2020.
Martida hudheelku waxay si dhakhso ah ugu heli karaan Xarunta Shirarka Caalamiga ah ee Georgia, Gateway Center Arena, iyo meelaha kale ee soojiidashada iyo khibradaha ah.
Maaddaama taraafikada rakaabku ay ku sii socoto dib-u-celintoodii yaraa ee Madaarka Caalamiga ah ee Hartsfield-Jackson Atlanta, Wadada cusub ee loo yaqaan 'AC Hotel Atlanta Airport Gateway' ayaa dib isugu soo bandhigaysa suuqa iyada oo ah dookha la doorbido ee socdaalka socda maanta.
Waxay ku taal meel wax yar u jirta garoonka diyaaradaha ee ATL SkyTrain, 222-qol AC Hotel Atlanta Airport Gateway ayaa la furay Janaayo 2020. Hantidu waxay siisaa sahlanaan aan la qiyaasi karin oo laga helo Atlanta International, taariikh ahaan waa mid ka mid ah garoomada diyaaradaha adduunka ugu mashquulka badan.
Martidu sidoo kale waxay ku raaxaystaan ​​helitaanka degdegga ah ee Xarunta Shirarka Caalamiga ah ee Georgia, Gateway Center Arena, iyo meelaha kale ee soojiidashada iyo khibradaha ah
"Kooxdayada si wanaagsan u tababaran waxay diyaar u tahay inay soo dhaweyso safrayaasha si ay ugu raaxeystaan ​​soo dhaweynta heer caalami ah iyo waxyaabaha aadka u wanaagsan ee raaxada, xusuusta leh ee hoteelkan cusub ee quruxda badan," ayuu yiri Jeff Fowler, maareeyaha guud.
Faahfaahin kasta, AC Hotel Atlanta Gateway waxay muujineysaa casriyeynta casriga ah iyo naqshadeynta stylist-ka oo ay AC u aqoonsan tahay magaca Marriott, iyadoo sidoo kale lagu darayo jawiga bulshada ee jilicsan iyo dareenka magaalada.